Android မှာစာ​ဖတ်​ချင်​သူ​အတွက် Moon+ Reader Pro v3.0.6 Apk .
Tubemate Youtube Downloader Pro V2.2.5 Cracked Apk .
Oppo R5 Root နှင့် GMS ထည့်​သွင်း​နည်း..... .
Gamer တို့အတွက် မ​ရှိ​မ​ဖြစ်​လို​အပ်​သော Tool .
Android OS application များ
Coolpad 5316 Fastboot Firmware (China) 4.4.4
Coolpad 5316 Fastboot rom
Posted by Thit Naing Aye at 12:00 AM0comments
baidu Cloud crack Version
baiduyun သို့မဟုတ် baidu Cloud crack လေးပါ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရတာပိုမိုမြန်ပါတယ် patch လေးလည်းပါတယ်နော် Account ကို တကယ်သုံးတဲ့အကောင့် မသုံးပါနဲ့ Data စုထားအကောင့်တို့ဘာတို့ပေါ့....အသစ်ဖွင့်သုံးတာအကောင်းဆုံးပါ
Download Link : http://pc.cd/3JNctalK
Download Link2: http://pan.baidu.com/s/1bpvAo83
Posted by Thit Naing Aye at 3:08 AM0comments
Mobile Data ​ချွေတာသုံးမယ်
Hey ! NEOPARD helped me to save data and to speed up my mobile Internet connection, and for free ! Check this out :
Posted by Thit Naing Aye at 12:22 PM0comments
Labels: Android OS application များ
IMEI ​ပြောင်​းမယ်​ IMEI Changer Pro 1.0
Xposed Installer ရယူပါ
Framework install လုပ်​ပါ
IMEI CHANGER PRO တပ်​ဆင်​ပါ
IMEI CHANGER ဖွင်​့ပါ သင်​ကြိုက်​နှစ်​သက်​ရာ no. ရိုက်​ထည်​့ပါ apply လုပ်​ပါ rebootလုပ်​ပါ ​အောင်​မြင်​ပါပြီ အဆင်​​ပြေပါ​စေ။
Posted by Thit Naing Aye at 12:57 PM0comments
ဆန်​းသစ်​လှပတဲ့ MIUI7– Launcher Theme v7.0.4 Cracked
MIUI7– Launcher Theme
Launcher များ အတွက်​ MIUI7icon pack ထွက်​ရှိလို့လာပြီ
Action Launcher Pro ကိုက်​ညီမွုရှိ
SMART Launcher ကိုက်​ညီမွုရှိ
NOVA Launcher ကိုက်​ညီမွုရှိ
HOLO Launcher ကိုက်​ညီမွုရှိ
LIGHTNING Launcher ကိုက်​ညီမွုရှိ
LAUNCHER အားလုံး နီးပါး ကိုက်​ညီမွုရှိ ပါ သည်​
MIUI7– Launcher Theme v7.0.4 | Mirrors (27 MB)
MIUI7– Launcher Theme v7.0.2 | Mirrors (29 MB)
MIUI7– Launcher Theme v7.0 | Mirrors (29 MB)
ZTE Q705U Rom For Cable Flash
ROM Phone ZTE Q705U – ROM Android 4.2.2
Based ROM Official ZTE Q705U Version: Q705UV1.0.0B06 – P682V60V1.0.0B15
Gapps ပါဝင်သည် – အထူးခွင့်ပြုချက်မရှိပါ။
ဘာသာစကားထောက်ပံ့မှု : ဘာသာစကား ( ၇၀ )
ROM သွင်းရန် :
- Unpack FlashTools, နှင့် Flash_tool.exe အားဖွင့်ပါ
- ROM ထဲတွင် MT6582_Android_scatter.txt ဖိုင်အား ရွေးချယ်(Select) ပါ
- ဖိုင်များ Flash Tool ထဲသို့ ရောက်ရှိရန်စောင့်ပါ။
- ဖုန်းအား ပိတ် ပါ , ဘက်ထရီ ဖြုတ်ပါ.
- via USB data cable အား ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ.
- အနီရောင် ဘား ပန်းနုရောင် ဘား ,အဝါ ဖြစ်ပေါ်က ဖြစ်စဉ် စတင်ပါမည်
- နှင့် အစိမ်းရောင် အဝိုင် ပြသပါက
- ပြီးဆုံးပါပြီ !
- ယခု သင်ဖုန်းအား ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်ပြီး စိတ်ချစွာ ဖွင့်နိုင်သည်.
Need Rom log In လုပ်ခိုင်းပါက
Posted by Thit Naing Aye at 10:30 PM3comments
Zenfone6A600CG T00G V2.21.40.39 Firmware
Posted by Thit Naing Aye at 12:28 AM0comments
ညစ်ညမ်း Pageများ/Soccer News များလုံးဝမပါတဲ့ TZ သတင်းစုံ 4.0
TZ NEWS READER Version(5.0) (နောက်ဆုံးဗားရှင်း)
TZ NEWS READER.(Version 5.0) နောက်ဆုံးထွက် Version မှာ- [ ပြည်တွင်းသတင်းများ] -မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒ -Yangon Media Group...
Firmware နာမည် Huawei Y625-U32 ROM ဖုန်း​အမျိုး​အစား Huawei , Huawei Offical Firmware Version: Y625-U32V100R001C328B104 ...
HUAWEI G620-L72 ROM
HUAWEI G620-L72V100R001C17B126 to G620-UL01V100R001C428B151(Internal service use only) Date: 2015-1-6 Version: HUAWEI G620-L72V...
SINGTECH SAPPHIRE A55 ROM
Firmware နာမည် SING Tech SGT-Z500T Stock Rom ဖုန်းအမျိုးအစား SINGTECH ဖိုင်​အရွယ်​အစား 482.89MB Download Flashing Tool Donwlo...
Android OS game များ
iOS application များ
QQ ID:1516832339 or mail:saisomwan@vip.qq.com
Copyright © 2012 Myanmar Muse Mobile All Right Reserved